Konke Esikwaziyo 'Isikhathi Somqhele' Isizini 3 - Izindaba
'Umqhele' Usanda Kuthola Usuku Lokukhishwa ... Kanye nakho konke okunye esikwaziyo ngesizini 3
Crown Just Got Release Date
Impela, sesivele sabuka kakhulu ukuzitika ngendlela yethu Umqhele isizini yesibili (kabili…), kepha kulezi zinsuku ama-deet amathathu ayinto nje yokusidlulisa kulokhu kuhoxa okusabekayo.
Ngenkathi i-Netflix ingakavezi okuningi mayelana Umqhele ’S isizini ezayo yesithathu, kufanele sixwayise ukuthi amalungu ambalwa abalulekile e-O.G. Abalingisi ngeke babuyele ukugijima okuncane kombukiso. (Thatha umoya ojulile bese uvumela lokho kucwile.)
Nakhu esikwaziyo mayelana nesikhathi, usuku lokuqala, abalingiswa abasha kanye (gulp) nezikhala zikaClaire Foy (Queen Elizabeth) noMatt Smith (Prince Philip) kwisizini yesithathu.
U-Alex Bailey / Netflix
INetflix imemezele leso sikhathi sesithathu se- Umqhele izoqala ukukhonjiswa ngoNovemba 17, so clear your schedule, ladies and gents.
URobert Viglasky / Netflix
Isikhathi sokuqala senzeka ngasekupheleni kweminyaka yama-40s nasekuqaleni kweminyaka yama-50, futhi isizini yesibili kwenzeka eminyakeni yama-50s nasekuqaleni kweminyaka yama-60s. Isizini yesithathu izokwenza kubikwa maphakathi neminyaka ka-1964 kuya ku-1976.
Ngenkathi ngayinye yenzeka esikhathini esihlukile, lokhu bekuzokwenzeka, kepha akukwenzi kube lula. Zithandwa zethu UFoy uzophanyeka umqhele wakhe njengeNdlovukazi u-Elizabeth futhi adlulisele intonga kumlingisi waseBrithani u-Olivia Colman ( Ukusakaza ) izinkathi ezintathu nezine.
IPrincess Margaret evukelayo ngeke isaboniswa nguVanessa Kirby. Esikhundleni salokho, U-Helena Bonham Carter Uzongenelela. INkosana uPhilip? Tobias Menzies uzongena esikhundleni sikaSmith.
izinhlobo ezinhle kakhulu zezinja zabanikazi bokuqala
UJosh O'Connor ( UFlorence Foster Jenkins ) noMarion Bailey ( Ukuzibandakanya ) izothatha izindima zikaPrince Charles neNdlovukazi Umama, ngokulandelana. Abalingisi bazongena esikhaleni sikaJulian Baring noVictoria Hamilton, obedlala indawo yabo ngesizini yokuqala neyesibili.
U-Anwar Hussein / Getty Images noChris Jackson / Getty Izithombe
Umqhele abakhiqizi baqinisekisile EPennyworth U-Emma Corin uzoveza uPrincess Diana ongasekho ngesizini yesithathu. Ngenkathi umlingisi weLady Diana Spencer ezoba nengxenye encane kuphela kwisizini yesithathu, kubikwa ukuthi inkosazana izodlala indima enkulu kwesine (kanye nakwisizini yesihlanu engaqinisekisiwe).
Ukwengezwa okukodwa kubalingisi esikujabulele kakhulu, noma kunjalo, kunjalo Imfundo Yezocansi UGillian Anderson njengo 'Iron Lady' uMargaret Thatcher. U-Anderson uzodlala uBaroness ongasekho njengoba ezulazula kwezepolitiki futhi ekugcineni abe nguNdunankulu obesebenza isikhathi eside kunabo bonke ngekhulu lama-20 nowesifazane wokuqala ukuphatha leso sikhundla.
Ngaphezu kukaPrincess Anne, esishilo ngaphambili ukuthi uzokhonjiswa nguDoherty, kuzobuye kube nomlingisi uCamilla Parker Bowles ozodlalwa ngu Afonele umbelethisi U-Emerald Fennell.
Ngiphezu kwenyanga ngokuphelele, futhi ngesaba ngokuphelele, ukujoyina abantu abaningi kangaka abanamakhono amakhulu Umqhele , UFennell utshele I-TVLine . Ngimthanda ngokuphelele uCamilla futhi ngiyabonga kakhulu ukuthi iminyaka yami yobusha ingilungiselele kahle ukudlala i-serial snogger yokubhema nge-pudding bowl haircut.
ungakuphulukisa kanjani ukuwa kwezinwele nodaka
Kukufanele yini ukulinda? Impela, sithandwa sami.
OKUhlobene : 'Isithwathwa' Isizini 2 Siyabuyisa: Njalo Isiqephu Esimnandi
Ukubikwa okungeziwe kukaRoberta Fiorito
hollywood ama-movie wothando amahle kakhulu
izingxenye zokuqina kokuqina kwezempilo
uhlu lwamafilimu entsha yango-2017
umfana nentombazane ekamelweni
amathiphu wobuhle ebusweni ekhaya